ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမျိုးသမီးများမှာဆက်ဆံရေးတွင်အဘယ် Want ပါနဲ့?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 15 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
တစ်ဦး၏အဆိုအရ လေ့လာ ကျင်းပပြု 2012, 41% ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြား, 60% ဒုတိယလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် 73% ကွာရှင်းအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအဆုံး၌တတိယလက်ထပ်ထိမ်းမြား. ဤကယ့်ကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာနံပါတ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်အမေရိကန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကယ့်အားကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်ရန်ရုန်းကန်နေရကြောင်းကိုပြသ. ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိတစ်ဦးဆက်ဆံရေး, နှစ်ဦးစလုံးအပြည့်အဝမိတ်ဖက်အချင်းချင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်. ဒါကြောင့်, ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ကြည့်ရှုသူအချို့အရာဖြစ်ကြ၏.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: သင်သည်တစုံတယောက်ကိုမေတ္တာသည်ကိုကြည့်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ငါတို့မူကား, ဖော်ပြ. မပါဘဲရှေ့ဆက်မရွှေ့နိုင် “ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” အမျိုးသမီးများကိုယ့်ချစ်ရသူခံစားရရန်ကိုချစ်အဖြစ်. ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏အသက်တာတွင်ထိုလူကိုပုံမှန်ကြားကာလမှာချစ်ခင်စုံမက်၏အများပြည်သူ display ကိုလုပ်စေလိုသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှလုပ်ရပ်များနှင့်စကားများအားဖြင့်ပရိယာယ်သည်သူ့အဘို့သူ၏မေတ္တာကိုပုံဖော်ထားရန်သူ့ကိုလိုလား; ချစ်ခင်စုံမက်၏ရံဖန်ရံခါအများပြည်သူ display ကိုဖြစ်စေမဆိုးဖြစ်. ဒါကြောင့်, သင်ကလူကိုမှန်လျှင်, သင်နှစ်သက်သောမိန်းမနှင့်ခွန်အားကြီးသောနှောင်ကြိုးထိန်းသိမ်းထားဖို့သင်စကားနှင့်လုပ်ရပ်များကိုမှတဆင့်သူမ၏ကိုချစ်ဘယ်လောက်သူမ၏သတိပေးအပေါ်စောင့်ရှောက်ရမယ်.
လုံခြုံရေး: အသက်တာ၏ခရီးကိုမည်သူမဆိုအလွယ်တကူမဟုတ်ပါဘူး, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကျားမ၏, ဒါပေမယ့်မိန်းမတို့အဘို့ခရီးအများအားဖြင့်ပင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကအားလုံးနီးပါးသူတို့၏အသက်တာအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရလေ့, သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ပတ်သတ်သောကြီးမားသောရှယ်ယာ.
US မှာအမျိုးသမီးများအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုမဖြစ်. နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်လီဖုန်း စစ်တမ်းပါဝင်သော 612 ဇွန်လအတွက်ကောက်ယူအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများ, 2000 အားလုံးနီးပါးကသူတို့ကို၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်တွင်လမ်းပေါ်နှောင့်ယှက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြကြောင်းထင်ရှား. လှည့်ပတ် 87% အကြားသက်ကြီးရွယ်အိုအမေရိကန်အမျိုးသမီး 18 နှင့် 64 နှစ်တအထီးလူစိမ်းအားဖြင့်နှောင့်ယှက်ခံရအတွေ့အကြုံရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်.
နှောင့်ယှက်နေတဲ့များ၏ဤမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးသမီးအလွန်အမင်းမလုံခြုံသောအရွက်. ဒါကြောင့်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မိတ်ဖက်ချင်တယ်. အမျိုးသမီးများမှာပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်ပေးသူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသူတို့အားလုံလုံခြုံတယ်လို့ခံစားမိစေတော်မူလိမ့်မည်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်တောင့်တ.
သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ဟာလုံလုံခြုံခြုံခံစားရရာတွင်အောင်မြင်လျှင်လူအဖြစ်, သင်မကြာမီနှစ်ဦးစလုံးလိင်ကနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသင်သူမ၏အဖွင့်ဖွင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်. ဒီအလိုအလျှောက်သင်နှစ်အကြားရှိနှောင်ကြိုးပင်အားကောင်းစေတော်မူမည်.
ဟာသ: ဟာသမိန်းမတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးနေတယ်. အမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲဟာသဆိုလိုသည်မှာ၏အာရုံတစ်ခု bit နဲ့အတူလူကိုကြည့်ရှု. သူတို့ကိုရယ်မောစေနိုင်တဲ့သူ, လူ. တစ်ဦး၏အဆိုအရ စစ်တမ်း MarketTools Inc မှကဆောင်ရွက်, 58% အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ဟာသသဘောရှိသည်ချင်တယ်. ဒါကြောင့်, သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကပျော်ရွှင်နဲ့ content စေဖို့နည်းလမ်းတွေရှာနေတဲ့လူသည်မိမိအ wittiest အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်.
ရိုသေခြင်း: ကျနော်တို့နောက်ဆုံး ဖော်ပြ. နေကြသော်လည်း, ရိုသေလေးစားမှုအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိအမေရိကန်အမျိုးသမီး၏အများစုအတွက်ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိသည်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. MarketTools Inc မှအားဖြင့်အဆိုပါစစ်တမ်းကဖော်ပြခဲ့သည် 84% အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအောင်မြင်မှုရရန်သည်ဟုခံစားရ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှရိုသေလေးစားမှုရဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ.
သင်သည်အံ့သြရပါမည် “ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. ဘာ”? ဟုတ်ကဲ့, အမျိုးသမီးများဆွဲဆောင်မှုနေသောလင်နှင့်မိတ်ဖက်ရှိသည်ကိုချစ်, သို့ရာတွင်ထိုသူတို့အဘို့အကလူကိုကြည့်ရှုပါရန်ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုတဦးဘယ်တော့မှမဖြစ်.